Ny faha 15 ny volana izao moa no hasandrantra ho olon-tsambatra izy, araka ny fanazavan’ny mopera François Noiret, izay nitarika ny lahadinika momba ity oloben’ny finoana katolika ity taorian’ny tantara an-tsehatra momba ity mpampianatra ity. Teraka ny taona 1908 Ramose Lucien Botovasoa. 9 mianadahy izy ireo ary izy no zokiny indrindra. Ny taona 1922 izy no vita batemy. Nanaraka fiofanana tamin’ireo Jezoita ary nitohy tamina fiofanana mpampianatra ny taona 1928. Ny taona 1930 izy no nanambady an’i Suzanne Soazana ka niteraka 8 mianadahy saingy ny 5 tamin’ireo ihany no velona. Maro ny sendram-pinoana nolalovany, indrindra, taorian’ny nananganany ny “Terciaire Franciscaine Malgache” sy ny niraisany donakafo tamin’ireo misionera frantsay hanapariahana ny filazantsara. Nahavatra ho nanao fitafiana mahantra mihitsy izy tamin’izany nefa talena sekoly ka na ny vadiny aza nihevitra azy ho adala saingy izy kosa nanao izany ho fisedrana. Nafampana moa ny fitakiana fahaleovantena tamin’izany ka dia nalaina vondrona mpitolona Malagasy an-keriny izy ary maty nisy namono tao Vohipeno ny volana aprily 1947 satria nohampangaina ho mpamadika tanindrazana. Talohan’ny nahafatesany anefa dia nilaza tamin’ny vadin’izy fa ho asandratra ho Martiry ary neken’ny Papa François ny maha martiry azy ny 4 may 2017 teo.